SAWIRRO: Kooxda Barcelona oo soo bandhigtay maaliyaddeeda saddexaad oo ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub ee 2019/20 – Gool FM
SAWIRRO: Kooxda Barcelona oo soo bandhigtay maaliyaddeeda saddexaad oo ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub ee 2019/20
(Barcelona) 12 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ee ka dheesha horyaalka La Liga ee dalka Spain ayaa maanta soo bandhigtay maaliyaddeeda saddexaad oo ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub.
Barca waxa ay maanta shaacisay maaliyaddeeda saddexaad oo ay ku dheeli doonto fasal ciyaareedka cusub ee 2019/20.
Labiskan cusub oo ay kooxda Barcekiba ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub, waxaa farsameysay shirkadda qalabka isboortiga ee NIKE.
Soo bandhigtista maaliyaddan cusub ee Barcelona waxaa ka qeyb qaatay Gerard Piqué, Junior Firpo iyo kuwo kale.
Maaliyaddaan saddexaad ayaa midabkoodu yahay cagaar buluug xigeen ah ayaa gacmaha iyo qoorta ku leh aarad buluug ah iyadoo kuleetiga uu ay kaga taalo dillin weyn oo guduud ah, iyadoo maaliyaddan ay shafka kaga qoran yihiin magaca shirkadda ay xayeysiiyaan ee Rakuten, astaanta kooxda iyo midda shirkadda Nike.
Kooxda ka arrimisa garoonka Camp Nou ayaa horay u soo bandhigtay maaliyadda ay Minin iyo Marti ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub ee 2019/20.
RASMI: Kooxda Arsenal oo heshiis cusub ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda